Guddoomiyaha gobolka Shabellaha Hoose oo qarax ka badbaaday – Radio Muqdisho
Guddoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Shabeellaha Hoose C/fitaax Xaaji Cabdulle oo lahadlay Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee SONNA ayaa sheegay in guddoomiyaha gobolka Sh/hoose uu ka badbaaday qarax kooxaha nabad-diidka ah ay doonayeen iney ku waxyeeleeyaan.
C/fitaax Xaaji Cabdulle guddoomiye ku xigeenka gobolka Shabelleha Hoose ayaa sheegay in qaraxa uu ku dhintay mid kamid ah ilaalada guddoomiyaha, islamarkaana ay ku dhaawacantay guddoomiyaha deegaanka Ceelasha Biyaha, iyada oo uu jiro dhaawac aad u fudud oo soo gaaray guddoomiyaha gobolka Shabellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre.
Waxa uu sheegay in guddoomiyaha hadda uu badqabo iyada oo uu sheegay in dhaawaca gaaray uu yahay mid aad u fudud.
Guddoomiye ku xigeenka ayaa sheegay in kooxaha nabad-diidka ah ay ku guuldareysteen qorshahooda ku wajahnaa iney waxyeeleeyaan guddoomiyaha gobolka Shabellaha Hoose.
Guddiga qaban qaabada maalmaha xorriyadda oo booqday Wasaaradda Gaashaandhigga